Photo | Ceelka Garasweyne oo biyo laga dhaansanayo/Xusni/Ergo
Cabdiraxmaan Taysiir 19 January, 2016 BAKOOL
(ERGO) - Halkani waa duleedka waqooyi ee degmada Xudur. Waa meel bannaan oo dabeysha dhaceysa iyo kulleylka cadceedda aan loo adkeysan karin. Shan ceel-gacmeed oo biyahooda ay gabaabsi yihiin ayaa waxaa safaf dhaadheer ugu jira ku dhawaad 350 qof oo dhowr saac soo lugeynayay, qaarna maalmo sii joogay si ay biyo ugu dhaamiyaan qoysaskooda oo harraad uu ku haysto tuulooyin fogfog.
Yuusuf Macallin Maxamed, saddex maalin ka hor ayuu ka soo tegay qoyskiisa oo harraad daran uu ku haysto tuulada Garasweyne oo 50 km u jirta Xudur. “Ceelkan waxaan dul taaganahay maalintii labaad, safkuna aad buu u dheer yahay,” ayuu yiri. Wuxuu ka walwalsan yahay goorta uu biyo u heli karo qoyskiisa.
Guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Bakool, Deeq Maxamed Iftiin ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in ay jirto biyo yaraan baahsan oo ka dhalatay roob-yari, isla markaana ay gureen ceelal iyo ugu yaraan 15 warood oo ku yaalla tuulooyinka Mooragaabey, Abal, Teed, Baabaweyne, Quracjoome ilaa degmada Ceel-barde oo ka wada tirsan gobolka Bakool. “Biyo ma helaan dadka tuulooyinkaas. Waxay ku khasban yihiin inay u soo arooraan Xudur oo ah meesha ugu dhow ee ay biyo ka heli karaan,” ayuu yiri Deeq.
Hay’adaha samafalka ayuu ka codsaday inay biyo dhaamin ka sameeyaan tuulooyinkaas si looga hortago in ay dadku barakacaan.
“Haddii ay biyo yaraantu intaan ka badato waa dhibaato,” ayuu yiri Maxamuud Xuseen Macallin oo rajo xumo ka muujiyay inuu si dhaqso leh biyo uga dhaansan doono ceelka oo biyihiisa ay gabaabsi sii noqonayaan. Wuxuu Raadiyo Ergo u sheegay in uusan wax biyo ah uga soo tegin qoyskiisa iyo xoolahiisa. Gaari-dameer ayuu uga soo arooray tuulada Osbo-eelo oo 30 km u jirta Xudur.
Waa xoolo-dhaqato dadka ugu badan ee ay saameysay biyo-yarida ka jirta Bakool. Waxaa lagu jiraa jiilaalka oo ka mid ah xilliyada ugu qallalan Soomaaliya. Tiiyoo saddexdii toddobaad ee la soo dhaafay ay gobolka Gedo gaareen 175 qoys oo ka barakacay Bakool.